Global Voices teny Malagasy · 27 Desambra 2010
27 Desambra 2010
Tantara tamin'ny 27 Desambra 2010
Karazana fahandroan-tsakafo Krismasy eo amin'ny Bilaogin'ny Sakafo amin'ny ankapobeny
Amerika Avaratra27 Desambra 2010
Midika hoe 'mody an-trano' ny Krismasy ho an'ny olona maro - nefa rehefa tsy mety izany, dia mety ho fampaherezana ihany koa ny mikarakara sakafo mahagaga. Nizara ireo nahandro fialan-tsasatra tena tiany ireo mpitoraka bilaogy manerana ny kaontinana maro. Miaraka amin'ireo, afaka manonofy ianao miverina an-tanindrazana na mitsidika toerana izay...
Sodàna: fialan-tsasatra mahafinaritra sy fitsapa-kevi-bahoaka feno filaminana
Afrika Mainty27 Desambra 2010
Ireto misy sombina lahatsoratra farany amin'ny bilaogy mikasika ny Fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny fahaleovan-tenan'i Sodany Tatsimo. Raha ny hevitry ny fifanarhana Naivasha tamin'ny 2005 eo amin'ny governemanta afovoany any Sodany sy ny Hetsika Liberasion'ny Vahoaka any Sodany, hanao fitsapa-kevi-bahoaka i Sodany Atsimo ny amin'ny hijanonana na tsy ho faritr'i Sodany amin'ny 9...
Côte d'Ivoire: Vahoaka mizotra mankany amin'ny “Revolisiona Orange” iray hafa?
Na dia efa tsy milamilana be ihany aza ny rivotra iainana any Côte d'Ivoire, dia niakatra zana-tohatra vitsivitsy indray ny fihenjanana nandritra ny andro faramparany teo. Taorian'ny korontana tamin'ny 12 Desambra teo amin'ny antoko roa mpifanandrina sy ny fanalavàna ny tsy fahazoana mivoaka amin'ny alina nataon'i Laurent Gbagbo, dia miantso...